Bibechana Archives - विवेचना
Tag Archives: Bibechana
बिर्तामोड, साउन १७ । मोबाइलका स्मार्ट ग्राहकलाई लक्षित गरी बिर्तामोडमा सञ्चालनमा आएको रुप मोबाइल घर दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । स्मार्ट काउन्टरसहितको सोरुममा विश्वमा चर्चित ब्रान्डका मोबाइलको बिक्री भइरहेको सञ्चालक खगेन्द्र नेपालले बताए । बिर्तामोडको हनुमान सेन्ट्रलको दोस्रो तलामा रहेको रुप मोबाइल घरले मल्टी ब्रान्ड स्मार्ट सोरुम सञ्चालनमा ल्याएर …
सिन्डिकेटविरुद्ध पूर्वमा चल्यो सूर्योदय यातायात
बिर्तामोड, वैशाख २१ । सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीले सवारी नचलाउने घोषणा गरे पनि सूर्योदय यातायात एन्ड अटो प्रालिले शुक्रबार बिहानैदेखि यात्रुहरुलाई सुविधा दिइरहेको छ । बिर्तामोडमा मुख्य कार्यालय रहेको सूर्योदयका ३३ वटा बस नियमित रुपमा पूर्ववत सञ्चालन भइरहेको सञ्चालक नेत्र न्यौपानेले जानकारी दिए । सिन्डिकेट पक्षधर संघ र समितिले सवारी …
बजे‌टमा निगरानी राख्न पत्रकारलाई आग्रह
गौ‌रीगञ्ज । गौ‌रीगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रे‌ष्ठले‌ झापाली पत्रकारलाई आफ्नो‌ गाउँपालिकाको‌ चालु आवको‌ ५५ करो‌ड माथिको‌ बजे‌टमा अप्रत्यक्ष निगरानी राखिदिन आग्रह गरे‌का छन् । विवे‌चना दै‌निकले‌ आयो‌जना गरे‌को‌ एक दिने‌ आधारभूत पत्रकारिता तालिमको‌ उद्घाटन गदैर्‌ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समे‌त रहे‌का गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रे‌ष्ठले‌ भने‌, ‘यो‌ बजे‌टले‌ चालु वर्षमा गाउँका वडा …
कोमामा रहेकी गोमालाई मकाउबाट १ लाख ५ हजार सहयोग
बिर्तामोड, माघ १९ । मोरङ उर्लाबारी ९ घर भई हाल मकाउमा रहेकी गीता मगर शेर्पाको मन विवेचना डटकममा प्रकाशित एउटा समाचारले छोयो । गत माघ १२ गते प्रकाशित ‘घरमुली गोमा कोमामा, परिवारलाई छिमेकीको आश्रय’ शीर्षकको समाचार पढेपछि उनी भावुक मात्र बनिनन्, गोमाको जीवन रक्षार्थ मकाउका साथीभाइमाझ सहयोग संकलनमा जुटिन् । …
धुमपान, मद्यपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हो । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर, आजभोलि विद्यार्थीले स्कुल ड्रेसमै धुमपान गरिरहेको देखिन थालेको छ । चुरोट तान्ने, मधु गुट्खा खानुलाई सामान्य रुपमा हेर्न थालिएको छ । विद्यालय वरपर खुलेआम चुरोट-गुट्खा बेचिन्छ । ससाना नानीहरु यस्तो लतमा फस्दै जानुमा को दोषी ? …
एक वर्षमा आए ९ लाख ४० हजार पर्यटक
झापा। नेपाल सरकारको २०१७ मा वार्षिक १० लाख पर्यटक भितर््याउने लक्ष्य पूरा हुन सकेन । लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नुका धेरै कारण भए पनि मुख्यमुख्य कारण चाहिँ पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले बताए । अध्यागमन विभागको तथ्याड्ढअनुसार सन् २०१७ मा नेपालमा ९ लाख …
शिवलाई लिटल एञ्जल्सको साढे तीन लाख सहयोग
चारआली । दुवै मिर्गौला खराब भएर उपचाररत् लिटल एञ्जल्स स्कुलका कम्प्युटर शिक्षक शिव कुँवरलाई विद्यालयले १ लाख ५२ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । शुक्रबार विद्यालयले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी झापा मेचीनगर १० टिकापुर निवासी मिर्गौला पीडित शिक्षक कुँवरलाई सो रकम प्रदान गरेको हो । विद्यालयका प्रिन्सिपल …
सौरभ आचार्य एकपटक राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई सोधेका थिए, तपाइर्ंको महत्वाकांक्षा के छ ? बिपीले जवाफ दिए, तीनपटक चुनाव जितेँ भने १५ वर्षभित्र म सबै नेपालीलाई मजस्तै मध्यम परिवारको बनाउन सक्छु । हरेक परिवारमा एउटा दुहुनो गाई होस्, स्वस्थ खान पाउन् लाउन पुगोस्, छोराछोरीले पढ्न पाउन् । बिपीले आफोजस्तो …